Wholesale COVID-19 IgG / IgM Rapid Test Cassette (Colloidal gold), COVID-19 IgG / IgM Rapid Test vagadziri uye vanotengesa | HEO
COVID-19 IgG / IgM Inokurumidza Kuedza Kaseti (Colloidal Goridhe)
Yakarurama, inoshanda, inowanzo shandiswa.
1. [KUSHANDISWA KUMWE]
Iyo COVID-19 Antigen Rapid Test Cassette ndeye lateral kuyerera immunoassay inoitirwa hunhu hwekutarisa SARS-CoV-2 nucleocapsid maantigen mu nasopharyngeal swab uye oropharyngeal swab kubva kune vanhu vanofungidzirwa nezve COVID-19 nemubatsiri wavo wehutano.
2. [KUCHENGETEDZA NOKUGARA]
Chengetedza sehomwe muhomwe yakavharika patembiricha (4-30 ℃ kana 40-86 ℉). Iyo kit inogadzikana mukati meye kupera nguva yakadhindwa pane iyo yekunyora.
Paunongovhura homwe, iyo bvunzo inofanira kushandiswa mukati meawa rimwe chete. Kugara kwenguva yakareba kunzvimbo inopisa uye ine hunyoro kunokonzera kuora kwechigadzirwa.
iye ROTI uye zuva rekupera rakadhindwa pakunyorwa.
3. Muenzaniso Unganidzo
Isa minitip swab ine shaft inoshanduka (waya kana purasitiki) kuburikidza nemhino yakafanana nemukanwa (kwete kumusoro) kusvikira kusagadzikana kwasangana kana chinhambwe chakaenzana neicho kubva panzeve kusvika kumhino yemurwere, zvichiratidza kusangana nasopharynx. Swab inofanira kusvika pakadzika yakaenzana nenhambwe kubva mumhino kusvika pakuvhura kwekunze kwenzeve. Zvinyoro nyoro uye kumonera swab. Siya swab munzvimbo yemasekondi akati wandei kuti utore zvakavanzika. Zvishoma nezvishoma bvisa swab uchichi tenderedza. Zviratidzo zvinogona kuunganidzwa kubva kumativi maviri zvichishandisa swab rimwe chete, asi hazvidi kuti utore mienzaniso kubva kumativi maviri kana iyo minitip yakazadzwa nefluidhi kubva muunganidzwa wekutanga. Kana septum yakatsauka kana kuvhara ichigadzira kunetsekana pakuwana iyo specimen kubva kumhino imwe, shandisa iyo swab imwechete kuti uwane iyo specimen kubva kune imwe mhino.
Pinza swab munzvimbo yepashure pharynx uye matonillar nzvimbo. Bvisa swab pamusoro pembiru mbiri dzematoni uye yekumashure oropharynx uye dzivisa kubata rurimi, meno, uye matadza.
Mushure mekunge maSwab specimens aunganidzwa, swab inogona kuchengetwa mune yekuchera reagent yakapihwa kit. Zvakare zvinogona kuchengetwa nekunyudza musoro we swab mutabhu ine 2 kusvika 3 mL yehutachiona kuchengetedza solution (kana isotonic saline solution, tishu tsika solution, kana phosphate buffer).
1.Sunungura chivharo chedzidzo reagent. Wedzera zvese zveiyo specimen yekuburitsa reagent mune yekudzora chubhu, woiisa pachiteshi chebasa.
2.Insert iyo swab sampuro mune yekubvisa chubhu iyo ine yekudzora reagent. Tambanudza swab kanokwana kuita zvishanu uchinge uchimanikidza musoro kuzasi uye nerutivi rweyakaburitsa chubhu. Siya swab mutubu rekubvisa kweminiti imwe.
3.Bvisa swab uchisvisvina mativi ehubhu kuti ubudise mvura kubva kuswabi. Mhinduro yakaburitswa ichashandiswa semuyedzo wekuenzanisira.
4.Insert yekudonhedza tip mune yekuchera chubhu zvakanyanya.
(Mufananidzo wacho ndewe mareferenzi chete, ndokumbira utarise kuchinhu chakakosha.)
1.Tendera iyo bvunzo mudziyo uye zvienzaniso kuenzana kutembiricha (15-30 ℃ kana 59-86 ℉) usati waedzwa.
2.Bvisa bvunzo yekaseti kubva muhomwe yakavharwa.
3.Reverse iyo specimen yekuburitsa chubhu, yakabata iyo specimen yekubvisa chubhu yakatwasuka, chinja madonhwe matatu (angangoita 100μL) kune iyo specimen tsime (S) yemuedzo kaseti, wobva watanga iyo timer. Ona mufananidzo pazasi.
4. Mirira mitsara ine mavara kuti aoneke. Dudzira zvabuda pamaminetsi gumi nemashanu. Usaverenge zvawanikwa mushure memaminitsi makumi maviri.
Zvakanaka: * Mitsara miviri inoonekwa. Mutsara mumwe wakavarairwa unofanirwa kunge uri mudunhu rekutonga (C), uye mumwe mutsetse unooneka une mavara uri padyo unofanirwa kunge uri munharaunda yekuyedza (T). Yakanaka pakuvapo kweSARS-CoV-2 nucleocapsid antigen. Mhedzisiro mhedzisiro inoratidza kuvepo kwehutachiona maantigen asi kiriniki kuwirirana nenhoroondo yemurwere uye rumwe ruzivo rwekuongorora rwunodiwa kuti utarise mamiriro ehutachiona Mhedzisiro yakanaka hairegedze hutachiona hwehutachiona kana kubatana kwehutachiona nemamwe mavhairasi Mumiriri anoonekwa anogona kunge asiri iye anokonzera hosha.
Negative: Imwe tambo yemavara inowanikwa mudunhu rekutonga (C). Hapana mutsetse unowanikwa mudunhu rekuyedza (T). Mhedzisiro yakaipa ndeyekufungidzira. Mhedzisiro yekuyedza mhedzisiro haidziviriri hutachiona uye haifanire kushandiswa seyo chete hwaro hwekurapa kana zvimwe zvisarudzo zvehutongi hwevarwere, kusanganisira sarudzo dzehutachiona, kunyanya pamberi pezviratidzo nezviratidzo zvinoenderana neCOVID-19, kana kune avo vanga mukubata nehutachiona. Zvinokurudzirwa kuti mhedzisiro iyi isimbiswe nema molecular test nzira, kana zvichidikanwa, kune manejimendi manejimendi.
Haisiyo: Dhairekita rekutonga rinotadza kuoneka. Izvo zvisina kukwana vhoriyamu vhoriyamu kana zvisirizvo maitiro maitiro ndizvo zvikonzero zvingangodaro zvekutonga tambo kutadza. Wongorora maitiro uye dzokorora bvunzo uchishandisa new test kaseti. Kana dambudziko rikaramba riripo, rega kushandisa mujenya nekukurumidza uye bata wekuparadzira wemuno.
Pashure: COVID-19 Antigen Inokurumidza Yekuedza Kaseti Corona Virus Rapid Yekuedza Kit
Zvadaro: HCV Inokurumidza Kuedza Kaseti / Strip / kit (WB / S / P)
coronavirus IgGIgM Yekukurumidza Bvunzo
COVID-19 IgG / IgM Yekukurumidza Bvunzo
COVID-19 IgG / IgM Inokurumidza Kuedza Kaseti
IgGIgM Kukurumidza Bvunzo
COVID-19 Influenza A + B Antigen Combo Rapid Bvunzo ...
COVID-19 Antigen Rapid Bvunzo Makaseti